सर्वसम्मतका नाममा सबै सहमति ठीक या बेठिक ? – kapanonline
सर्वसम्मतका नाममा सबै सहमति ठीक या बेठिक ?
सन्दर्भः जोरधारा खानेपानी संस्था र नवदुर्गा सामुदायिक संस्थाको साधारणसभा
कपन अनलाइन\_माघ १३, २०७१
– बद्रि भट्टराई
नेपालको वर्तमान राजनीति र समाजका विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई जनमतको भन्दा पनि सहमतिको यात्रा सहज हुन थालेको छ । केन्दि«य राजनीतिमा सर्वसम्मतको नारा लिएर केहि सिमिति नेतृत्वकर्ताहरुले नै निर्णय लिने गरेका छन । माथिल्लो तहमा हुने त्यस किसिमको निर्णयलाई सम्पूर्ण राजनैतिक दलका स्थानीय नेता तथा कार्यक्रताहरुले जमेर विरोध गरिरहेका हुन्छन । त्यो विरोध चाहे चिया पसलमा होस वा चोक चौबाटोमा सुन्दा र हेर्दा लाग्छ यिनिहरुमा पो छ त जनमत स्विकार्ने क्षमता । यो क्षमताको कदर गर्दा नर्गर्दै फेरी जमात जब स्थानीय निकायमा रहेका समाजिक संघ संस्थाको नेतृत्वगर्ने कुराहरु आउछ तब यहाँ पनि हुन्छ मुठिभर नेतृत्वकर्ताको सर्वसम्मति । माथिल्लो तहको विरोध अनि तल्लो तहमा आफै सोहि निर्णय गर्ने परिपाटी बनेकाले समाजमा सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक सोच हावी हुँदै गएको पाईन्छ । लोकतन्त्रको न्युनतम मौलिक अधिकार भनेको नै हरेक सदस्यले आफ्नो कुरा राख्न पाउनु, भन्न पाउनु र योग्यता क्षमताले दिएको ठाँउमा आफ्नो दाबेदारी देखाउन पाउनु हो, तर समाज त्यो बाटोमा पटक्कै जान सकेको छैन ।
समाजको समग्र विकासमा स्थानीय तहका राजनैतिकदलका नेता तथा कार्यक्रताहरुको अत्यन्त ठुलो भुमिका रहन्छ । समाजमा उनिहरुको नेतृत्व क्षमता, आर्थिक पारर्दशिता, न्यायमा सत्यताको पक्ष आदी जस्ता विषयले समाजलाई डोराईएको हुन्छ । हाम्रो समाज कल्पनाको त्यो टाकुरमा छ कि हामी आफुले आफुलाई बाहेक कोहि कसैलाई सबल मान्नदैनौ । आफ्नो तर्क , आफ्नो योगदान र आफ्नो काम नै संसारको सबैभन्दा ठुलो त्याग हो । हामी समाजसेवाका नाममा अरुलाई औला उठाउछौ त्यो पनि खबरदारीको हैन चेतावनीको अनि भन्छौ तैले के गरिस, तेरो समयमा के काम भयो, तँ भएर नै यो सबै भत्किएको हो । म भएको भए यसो हुन्थ्यो उसो हुन्थ्यो यो चेतावनीमा हामीले आफुलाई चटक्कै विर्सिएका हुन्छौ । यो हुनुको कारण नै सर्वसम्मतका नाममा हुने सबैसहमत हो । हामी समाजका उत्कृष्टहरु मध्ये सर्वोत्कृष्टलाई सर्वसम्मत बनाउन खोजिरहेका छौ सिद्धान्तमा तर हाम्रो व्यवहार सबै उत्कृष्टहरुलाई एकै ठाँउमा राखेर सवैसहमत बनिरहेका छौ । यो बोलाई, गराई, र बुझाईको भिन्नताले देशलाई कमजोर बनाइरहेको छ अनि बनाईरहेको छ कपनलाई गाविसलाई पनि आखीर किन यस्तो भइरहेको छ ।
साविक कपन गाविस हाल बुढानीलकण्ठ नगरपालीकाको वडा नं १२,१३,र १४ नं वडाका विभिन्न समाजिक संघसंस्थाहरुको साधारणस सभा हुने सुचनाहरु संगै सबैतिर सरगर्मी बढेको छ । अझ स्थानीय दलका नेताहरुको सक्रियता भने दिन दुइगुना रात चौगुना भएको छ । गाविसबाट नगर बनेसंगै भुमिका विहिन भएका विभिन्न दलका नेताहरु अब स्थानीय संघसंस्था मार्फत आफुलाई सक्रिय बनाउन खोजिरहेका छन । राजनीति मार्फत समाजसेवा गर्ने भनेर अघि बढेका दलका नेता तथा कार्यक्रताहरु पद प्राप्तिका लागि यति व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका छन कि उनिहरु साधारण जनभावनको कदर समेत गर्न सकिरहेका छैनन ।
लोकतन्त्रको ढोल बजाउने अनि केन्द्रको निरंकुश निर्णय पद्धतिको विरोध गर्नेहरु आफु कुनै संस्थाको नेतृत्व तहमा जान खोज्दा जनताको मतलाई कदर गर्न किन सकिरहेका छैनन । किन जनताबाट निर्वाचिन हुन डराईरहेका छन , के समाजसेवमा व्यक्तिको हारले संस्था बलियो हुन्छ भन्ने भाषण गर्नेहरु व्यवहारबाट टाढा भाग्नखोजिरहेका छन । यो कस्तो समाज सेवा हो जहाँ समाजसेवका नाममा दम्भ राख्ने । यो कस्तो राजनीति हो जहाँ हार्न नहुने यो परम्परा कपनमा चलिआएको छ । पछिल्लो समयमा कपनका दुई ठुला संस्थाहरुको सधारण सभा हुने पर्खाइमा छ समाज एक जोरधारा खानेपानी संरक्षण संस्था र अर्को नवदुर्गा सामुदायीक स्वास्थ संस्था यी दुवै संस्थाहरु मानव जिवनको अति आवश्यक क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने संस्थाको रुपमा पर्दछन । साधारण सभाको ५ दिनको वरपरमा यस लेखकले स्थानीय तहमा अध्ययन गर्दा कुनै पनि व्यक्ति, राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आफुलाई योग्य र क्षमतावान ठानेर जनतको मत लिएर काम गर्न सक्छु भन्ने उम्मेदवार भेट्न र देख्न सकिएको छैन । मेरो अध्ययनमा विरोधको स्वर बनाउने समाजलाई नकारात्मकता तर्फ धक्केलने केहि जमात भने भेटिएको छ । आफु संस्थाको नेतृत्व लिन नसक्ने लिन खोज्नेहरुलाई हतोत्साही बनाउने अनि संस्थाको सम्भावना र भविष्यलाई तिरस्कार गरेर विगत र दोषारोपणको विषय लिएर आफु समाजको जिम्मेवार नागरीक भएको कर्तव्यलाई समेत विर्सने ।
यी परम्पराहरुलाई अब हुने संस्थाका सारधारण सभाहरुले परिर्वतन गर्न सकुँन सर्वसम्मतका नाममा हुने सबैसहमतको प्रकृयालाई प्रत्यक्ष जनताकामाझबाट आफ्नो योजना पारित गराएर गौरवका साथ काम गर्ने सारथीहरु यस पटकबाट कपनमा देख्न पाउने वातावरण बनोस सम्भव भए सबै सदस्यहरुको जनमत लिएर नसके धेरैभन्दा धेरै जनताको साथ लिएर अघि बढ्ने साहास गरौ नभए जनताको असहमतिलाई स्विकार गरेर जनताबाट स्विकृत व्यक्तिलाई साथ र सहयोग गरौ । तब मात्र कपनको पहिचान बलियो बन्ने छ हैन भने हजारौं लाखौं रुपैयाको खर्च गरेर तामझाम गरेर, केहि सिमित निर्णयलाई मान्ने हो भने किन जनतलाई ताली बजाउन बोलाउनु ?